ညိုထက်ညို ● အောင်ဘညို (သို့မဟုတ်) ဘဝကို တစစီ လိုက်စမ်းသူ | MoeMaKa Burmese News & Media
……………………………… …………………………… ………………………….
…………………………………. ………………………………. …………………………
………………………………………….. ………………………………….. ……………………………..
……………………………….. …………………………… …………………………….
သြော်…ကျနော်တစ်ပုဒ်စနှစ်ပုဒ်စဖတ်ဖူးသော ကဗျာများ၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်သော ကဗျာဆရာအောင်ဘညိုပါကလား။
……………………………………… ………………………………… ……………………………..
ဆောင်းပါး၏အမည်က ‘ငှက်ကြီးတောင် နှင့် ကဗျာဆရာ’ တဲ့ ….
……………………………………. ………………………………… ……………………………….
………………………………………. ……………………………………. …………………………………
သို့သော်… သို့သော်… သို့သော်… မြောက်မြားလှစွာသော သို့သော်တွေနှင့် ပြီးပြည့်စုံလှသော ကျနော်တို့ ဘဝ တွေထဲ သူ့ထံမှ ဆရာခင်လွန်းထံပေးလိုက်မည့် စာကလေးကို သွားယူရမည့်ကိစ္စလည်း ပါသွားသည်။ ကျနော် ပြန်ခါနီး အလုပ်အလွန်များနေသောကြောင့် သူ့ဘက်သို့ခြေဦးမလှည့်နိုင်ဘဲ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီလိုနှင့် ကျနော် သူ့ ထံသို့ ပြန်မရောက်ဖြစ်ဘဲ နယူးဇီလန်သို့ ပြန်ရောက်သွားသည်။ ပြန်ရောက်သွားပြီး လေးငါးလအကြာ ၂၀၁၄ ဧပြီလကျတော့ ဆရာခင်လွန်းနေထိုင်ရာ ဟယ်လ်မင်တန်မြို့ကလေးမှာကျင်းပသော မြန်မာသင်္ကြန်မှာ ကျနော် နှင့် ဆရာခင်လွန်း တွေ့မိကြသည်။ ဆရာခင်လွန်းကို သူနှင့် တွေ့ခဲ့ရသည့်အကြောင်းနှင့် သူ့ထံမှ စာကလေး ယူ မလာနိုင်ခဲ့သည့်အကြောင်း ပြောမိတော့ ဆရာခင်လွန်းက ခေါင်းညိတ်ရင်း ကျနော့်ကို နားလည်ကြည့်ဖြင့် ကြည့် နေသည်။ ပြီးတော့ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်လည်း လမ်းခွဲခဲ့ကြသည်။
…………………………………….. ……………………………………… ……………………………….
………………………………………. ……………………………………… …………………………………
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်လကျော်ကျော်လောက်က ကျနော်ရန်ကုန်သို့ ပြန်ရောက်သည်။ ပြန်ရောက်ပြီး တစ်လခွဲလောက် ကြာတော့ ၃၄ လမ်းထိပ်က ‘လပြည့်ဝန်း’ သို့ နေ့လယ်ဘက် ပြန်ရောက်သွားသည်။ ‘လပြည့်ဝန်း’ တွင် ဟို အရင်တခါရောက်ခဲ့စဉ်က တွေ့ခဲ့သောကဗျာဆရာများ တယောက်မှမရှိဘဲ ပျောက်နေသည်။ ဆိုင်ကောင်တာမှာ ထိုင်နေသော ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုမေးကြည့်တော့ ပူလွန်းသောကြောင့် ဘယ်သူမှမလာနိုင်တော့ဟု ဖြေသည်။ တဆက်တည်း ကျွဲကူးရေပါ သူ့အကြောင်းရောက်သွားတော့ ဆိုင်ရှင်လုပ်သူက ‘သူကတော့ ဘယ်သူ့မှ ဒုက္ခ မပေးသွားဘူးဗျာ…မုန့်ဟင်းခါးစားပြီး ခဏကြာတော့ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်သွားတာ…ခေါက်ခနဲပဲ… အိမ်မှာ ပဲဆုံးသွားတာ’ ဟု သူ့ အဆုံးသတ် နိဂုံးကို ကျနော့်ကို ပြောသည်။ ပြီးတော့ ‘သူ မရှိကတည်းက ဒီမှာလည်း လူတွေသိပ်မရှိတော့ဘူး’ ဟု စကားဆက်ပြန်သည်။ ခဏနေတော့ ကျနော်လည်း ထိုင်ရာမှထပြီး အိမ်ကိုပြန်ခဲ့ သည်။